नेपाली फुटबलरहरुको अर्को लज्जाष्पद हर्कत ! महिला फुटबलमा मैदानमै कुटाकुट - News20 Media
January 22, 2020 January 22, 2020 N20LeaveaComment on नेपाली फुटबलरहरुको अर्को लज्जाष्पद हर्कत ! महिला फुटबलमा मैदानमै कुटाकुट
धनकुटा, माघ ७ । धनकुटामा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय ‘सहिद रामकृष्ण श्रेष्ठ महिला गोल्डकप फुटबल’ प्रतियोगिताको उपाधि मोरङ महिला फुटबल टोलीले जितेको छ ।
मंगलबार धनकुटाको तल्लो टुँडिखेलमा सम्पन्न फाइनल खेलमा मोरङले धनकुटा महिला फुटबल टोलीलाई १–० ले पराजित गर्दैै उपाधि उचालेको हो । मोरङकी इमा राईले दोस्रो हाफको सातौं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत् गरेको गोल नै जितका लागि निर्णायक बन्यो ।
खेलको अन्तिम समयमा धनकुटाका प्रशिक्षक र रेफ्रीबीच झगडासमेत भएको थियो । धनकुटाका खेलाडीलाई मोरङका खेलाडीले ‘डीबक्स’मा लडाउँदासमेत पेनाल्टी नदिएको भन्दै धनकुटाका प्रशिक्षक आक्रोशित बनेका थिए ।
जितसँगै मोरङले ट्रफीसहित एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्‍यो । उपविजेता धनकुटाले ५० हजारमा चित्त बुझायो ।
मच्छिन्द्र र पुलिस भिड्ने
शहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबलमा आजबाट आठौं चरणका खेलहरु सुरु हुँदैछन् । आठौं चरणको पहिलो खेलमा आज लिगको उपाधि दाबेदार मछिन्द्र क्लबले नेपाल पुलिस क्लबको सामना गर्नेछ । यो खेल दशरथ रंगशालामा दिउँसो ३ बजे सुरु हुनेछ ।
मछिन्द्रको ७ खेलबाट १३ अंक रहेको छ । गत सिजनको लिगमा पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको मच्छिन्द्रले यो सिजन एक अंक ऋण बोकेर लिग सुरु गरेको थियो । उसले अहिलेसम्म ४ जित, २ बराबरी र १ हारको नतिजा बटुलेको छ । उता लिगमा ७ खेल खेलेको पुलिस क्लबको ११ अंक रहेको छ ।
पुलिस ३ जित, २ बराबरी र २ हारको नतिजासहित तालिकाको छैटौ स्थानमा छ । ७ खेलबाट १६ अंक जोडेको त्रिभुवन आर्मी क्लब लिग तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।